Inguqulo 0.9.9.0 – Basebenzi bezwe – kubahlanganisa!
Kwangathi 1, 2016 by okunikezwayo 8 Amazwana
Esikhathini sokuqala kwezine ngisesimweni May, usuku lezisebenzi zakwamanye amazwe siye ekugcineni kudedelwa version kakhulu kade futhi obekulindelekile of 0.9.9.0.
Kuyini lokhu version kuhle?
Okokuqala – support for Baidu, amaShayina search giant lapho futhi ube injini translation, ngokusekelwa for Cantonese okuyinto kunalokho esihlukile sale injini. Enye into enhle wukuthi nale injini, amawebhusayithi sabamba ku China ungathola ukufinyelela esebenza ukuhumusha injini.
Okwesibili – siye fixed isihluthulelo yamanje ukwesekwa kancane of kokubili Google no Yandex, ngakho empeleni kufanele ngisebenze manje. Ngakho uma amakhasi ambalwa e site zakho akuhunyushiwe, version entsha safike nawe simboziwe. A izilimi ezimbalwa kwanezelwa kule nqubo.
Okwesithathu – izinguquko eziningi, anezele nokulungiswa kwamaphutha nxazonke. Yeah, kudingeka silungise imibhalo kanye FAQ for abanye.
Kungani wena namanje kokufunda lokhu? Just uthuthukise i namuhla, kanye nomsebenzi kusasa!
Lalihlezi Ngaphansi: Izimemezelo ukukhululwa, Izibuyekezo Software
wesixhumi Barcelona uthi
Kwangathi 11, 2016 at 4:09 pm
Perfect ngiyabonga kakhulu! Sisalindile ngamawala ngale nguqulo entsha 🙂
Kwangathi 13, 2016 at 1:50 pm
Siyabonga umsebenzi wakho onzima.
Kwangathi 21, 2016 at 7:24 at the
Kubukeka kukuhle. Ngiyabonga.
Umbuzo Quick: iseva wami Opcache efakwe, esebenzayo futhi ukusebenza. Ingabe ikusasa ukukhululwa os Transposh ukwesekwa Opcache?
Kwangathi 24, 2016 at 5:58 pm
Opcache akuyona isilondolozi umsebenzisi, kodwa iyiphi isilondolozi iskripthi umsebenzisi ukuthi siyazi kabanzi ngezinselelo (Apc, APCu, xCache) asekelwa.
Ngiyazi lokhu plugin kusukela ~ 2010 kodwa ekuqaleni ngaqhubekela WPML njengoba Bengithi echwepheshile… (hhayi phiko efanayo Transposh, WPML akuzenzakaleli)
Akukaze kubonwe mina okungalungile ngaphezulu… ngezinye izikhathi WPML kwadingeka izimbungulu ezibalulekile (Ngangisebenzisa ke esayithini njengoba kungabantu abangaphezulu kuka 20.000 evakashela usuku) futhi kanye WordPress ubuyekezwe nge inguqulo entsha, i bug engaziwa ukuthi igcinwe indawo yami ngaphandle kwe-intanethi zase zihleliwe WPML e mayelana 10 izinsuku… I ababengenamandla okukuthola isikhathi eside elinde ezifana, traffic lami kwakungenxa organic-Google ucinise kakhulu Ukuphumula…
Transposh ngaphandle kokungabaza engcono translation plugin, nakuba akusiwona ephelele, kungcono kakhulu futhi zigcinwe kahle.
Omunye the best khulula Translation-plugin futhi umbono wami iwona ongcono.
Kungaba abanye ngcono isibonelo slug translation and abanye nezindaba ezihlobene amayunithi wezinhlamvu wokuhumusha kungaba kuzolungiswa.
Lokhu ozithandayo translation plugin yami.
Havent esetshenziswa okwamanje, kodwa iqiniso lokuthi uma ikubona Baidu yihle. Awuqinisekile ezinhle kanjani izinga lokuhumusha Baidu sika ufaniswa-Google.
Ngakho nice yayo ukuthi kuphela isebenzisa Baidu Chinese, Izinduku nge-Google yonke enye indawo.
Ngiyabonga 🙂 ngomsebenzi wakho kumnandi
Changeset e Transposh-wordpress [c4740c0]: Yebo, kufanele usethe kabusha zokubala Yandex proxy futhi oshintshweni. December 5, 2018
Changeset e Transposh-wordpress [2fb9f69]: wordpress 5 isebenzisa WP-json ukuze uthumele izinto, akufanele yini sizame ... November 23, 2018
Changeset e Transposh-wordpress : PHP 7.2 create_function yehlile, ngakho lokhu manje engaziwa ... November 23, 2018
Changeset e Transposh-wordpress : PHP 7.3 inendlela ezahlukene - wezinhlamvu e preg izinkulumo, kanjalo ... November 23, 2018
Changeset e Transposh-wordpress [d4911aa]: Bing ungeze Telugu November 23, 2018
okunikezwayo on Inguqulo 1.0.3 – Kungani ungabi angithumelele umyalezo?
Fabio on Inguqulo 1.0.3 – Kungani ungabi angithumelele umyalezo?
ocean ezibanzi on Inguqulo 1.0.0 – Sesifikile isikhathi